Hiran State - News: HS:-Musharraxa Madaxweynennimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
HS:-Musharraxa Madaxweynennimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
HS:- Kadib xil ka qaadistii ay maanta ku sameeyeen xildhibaanada baarlamanka gudoomiye Shariif Hasan Shiikh Aden ayaa waxaanu xiriiro kala duwan la yeelanay siyaasiyiin, qareeno iyo waliba musharaha ugu cad cad doorashada soo socota Professor Ahmed M Warfaa.
Inkasta oo ay dad badan oo aanu siyaabo kala duwan ula xariirnay sheegayaan in loobaahnaa xil ka qaadista Shariif Hasan hadane Madaxweynaha Mustabqalka Professor Ahmed Muumin Warfaa ayaa talo ku soo jeediyey in la xakameeyo qilaafka mudanayaasha baarlamanka loona madax banaaneeyo howlahooda shaqo.
Professor Warfaa oo xiliga aanu la xariirnay isku diyaarinayey safar uu dhawaantan ku tagayo magaalada Washington DC ayaa ku nuux nuuxsaday in 550 ka mudane ee baalamanka yahiin kuwo wax badan waaya aragnimo u leh oo ay qaarkood yahiin mudane baarlamaan ilaa 2004kii wax badana xog ogaal u yahiin isagoo talo ahaan ku soo jeediyey in ay socdaan kulamada baarlamaanka halkii ay iska xirnaan lahaayeen si ay mudanayaashu u gutaan waajibaadkooda shaqo.
Professor Warfaa ayaa dowlada kumeel gaarka ah ku dhiirageliyey iney xil iska saarto sidii shacabka Somaliyeed looga saari lahaa xiliga kumeel gaarka wadankana ay uga dhalan laheyd dowlad rasmi ah oo dib u soo celisa nabadii iyo kala danbeyntii.
Ugu danbeyn waxuu madaxweynaha mustaqbalka u mahadceliyey hay'ddaha gar gaarka iyo wadamada deeqda bixiya sidii ay umada Somaliyeed u caawiyeen amaba ugu gurmadeen xiligii adkaa ee ay Abaaruhu ku dhufteen inta badan dalka Somaliya iyo bariga Africa.
· admin on December 13 2011 17:28:13 · 0 Comments · 2126 Reads ·
14,586,063 unique visits